Soomaali badan Oo Denmark ku dhaqan oo ka cabsi qabo in la soo masaafuriyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 21 July 2015
Copenhagen ( Mareeg)- Sida ay ku waramayso warbaahinta Caalamka Soomaali badan oo ku dhaqan dalka Denmark ayaa cabsi ka qaba in laga soo masaafuriyo dalkaasi.
Soomaaliddan Magangalyo doonka ah oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ay jirto qorshe ay wado dowlada Denmark oo la doonayo in dadka sharci darada ku jooga dalkaas ee qaxootigu ka mid yahay in dib dalalkooda loogu celiyo ayna ka cabsi qabaan in arintaasi ay saamayso madaama ay dalkaas ku jogaan sharci daro.
“ waxaan halkan u imaanay in aanu helno nolal ka wanagsan tan ka jirta Dalkaanaga waxaana aan ka cabsi qabnaa in nala masaafuriyo “ sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay Cabdi Cali oo ka mid ah Soomaalidda ku nool dalka Denmark.
Hay’addaha u dooda xuquuqda banii’adamka ayaa dhankooda qaba walaacan ku aadan in la dalkaasi laga soo tarxiilo dadka Magangalyo doonka ah ee naftooda kala soo baxsaday dalal ay Soomaaliya ku jirto oo amni daro iyo abaaro xoogan ay sameyen 20 kii sano ee ugu dambaysay.
Hay’ddaha banii’adanimadda ayaa sidoo kale xusay in dadka qaar ay ka soo carereen dalal ay kala kulmeen dhibaatooyin banii’adanimo oo ay ku jirto kufsi jirdil iyo dambiyadda la mid ah.
Dadka ugu badan ee Caalamka Magangalya doonka ah ayaa Soomaaliddu waxa ay kaga jirtaan kaalamaha hore.
Maamulka Galmudug oo beeniyay in Ahlusuna ay qabsadeen Caabudwaaq